တရားဥပဒေဟာ လူမျိုး ဘာသာ ခွဲသလား
ဘန်ကောက် Emporium ကုန်တိုက်၌ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား
တရားရုံးချိန်းတိုင်း သပိတ်မှောက်မည်ဟု စစ်ကိုင်း အလုပ်သမားများပြော
ပရီမီယာ ကော်ဖီ စက်ရုံကို ပုဒ်မ ၂ ခုဖြင့် အစိုးရ တရားစွဲ
မြန်မာနှင့် ဆက်ဆံရေး အသစ်တခု တည်ထောင်ရန် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဆန္ဒရှိ
လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်နှင့်စုဝေးခွင့် ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပြင်ဆင် ပယ်ဖျက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရန် HRW တိုက်တွန်း
အလုပ်သမားသံအရာရှိထံ အပ်နှံထားသည့် လူကုန်ကူးခံ မြန်မာ ၃ ဦးထွက်ပြေး
လူသိနည်းတဲ့ ကားအမျိုးအစားကောင်း Toyota Voxy
သာယာဝတီညောင်နီကျေးရွာရှိ မူလတန်းကျောင်းတွင် ကျောင်းသား ၇၇ ဦး ဆက်တိုက်ဖျားနာ
မ.ထ.သ ဖျက်သိမ်း၍ ရန်ကုန်မြို့တွင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စနစ်သစ် ကျင့်သုံးရန် စီစဉ်နေ
နေ့နံအလိုက်ရော ဖန်စီအဖြစ်ပါ ဝတ်ဆင်လို့ရတဲ့ အဆောင်လက်ကောက်များ
By ၀င်းကိုမောင်3July 2016
Objective, Burma! ဇာတ်ကားဟာ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာ ဗမာပြည်ရဲ့ ဖြစ်ပျက်ကြုံတွေ့ ခံစားရတာတွေကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဗမာပြည်ရဲ့ စစ်မြေပြင်အကြောင်း ဇာတ်ကားတကား ဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ် ကိုလိုနီခေတ်ကို တော်လှန်တိုက်ခိုက်ဖို့ အတွက် ရဲဘော် ၃ ကျိပ်ဟာ ဂျပန်အစိုးရကို အကူအညီ တောင်းခဲ့လို့ ဂျပန် စစ်တပ်ဟာ ဗမာ့တပ်မတော်နဲ့အတူ ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကို တိုက်ခိုက် အောင်မြင်ပြီးတော့ ဗမာ့ပြည်ဟာ သူတို့ပိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ဖက်ဆစ်တို့ရဲ့ အရိုင်းအစိုင်း စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ ဘာသာ၊ သာသနာ အပေါ်မှာရော တိုင်းသူပြည်သားတို့ရဲ့အပေါ်မှာရော ရက်စက် ကြမ်းကြုတ်စွာ အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကျ စိုးမိုးမှုတွေလုပ်လာပါတယ်။ “ကဲ အောင်ဆန်းရေ၊ မင်းပင့်လာတဲ့ဘုရား မင်းပြန်ပို့ဖို့ လုပ်ပေတော့” ဆိုတဲ့ ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းရဲ့ စကားအတိုင်း ဖက်ဆစ်ဂျပန်ကို ပြန်လည် နှင်ထုတ်ဖို့အတွက် အင်္ဂလိပ်ကို မဟာမိတ်အဖြစ် ပြုရပြန်ပါတယ်။
ဒီအကြောင်းကို ဒါရိုက်တာ ရာအူးလ် ဝေါ့လ်ရှ် (Raoul Walsh) က ရိုက်ကူးပြီး ဝါနာဘရားသား ကုမ္ပဏီက ၁၉၄၅ မှာ ထုတ်လုပ်ပါတယ်။
ရုပ်ရှင်ကားရဲ့ ပြသမှု ကြာမြင့်ချိန်ဟာ ၁၄၂ မိနစ်ဖြစ်ပြီး၊ အဖြူအမည်းဇာတ်ကား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားရဲ့ အဓိက ဇာတ်ကောင် ဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်ကြီး နယ်လ်ဆင်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ရမယ့်သူကိုတော့ အာရိုးလ် ဖလင်း (Errol Flynn) ကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတယ်။
“ဗမာပြည်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြမ်းတမ်းဆုံး စစ်မြေပြင်” ဆိုတဲ့ စာတမ်းကြီးနဲ့ ရုပ်ရှင်ကို စတင်ပါတယ်။ အလွန်တိုတောင်းတဲ့ ကာလအတွင်းမှာပဲ ဂျပန်တွေဟာ ဗမာပြည်ရဲ့ လမ်းတွေကို ပိတ်ဆို့ထားနိုင်လောက်အောင် အောင်မြင်နေပါတယ်။ ဗမာပြည်ရဲ့ ထွက်ပေါက်လမ်းတွေ မှန်သမျှကို ပိတ်ဆို့ထားနိုင်သလို တရုတ်ပြည်ဘက် ထွက်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ အနောက်ဘက်ကို လည်း ပိတ်ဆို့ထားလို့ ပြန်ပွင့်အောင်လုပ်ရမယ့် အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကိစ္စအတွက် အမေရိကန်တွေ၊ တရုတ်နယ်တပ်တွေ အပါအဝင် အင်္ဂလိပ် စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်းက သူတို့ရဲ့ဌာနချုပ်တွေမှာ ခေါင်းချင်းရိုက်ကာ အလုပ်ရှုပ်နေကြပါတော့တယ်။ “မောင့်ဘက်တန်” ရဲ့ အိန္ဒိယ အခြေစိုက် စစ်ဌာနချုပ်တခုမှာ လျှို့ဝှက်ချက်ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်နေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလျှို့ဝှက် ပြင်ဆင်မှုတွေကလည်း လအတော်ကြာ ခရီးပေါက်နေပြီဖြစ်တဲ့ ပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေးကို စတင်ဖို့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
ဗြိတိသျှဗိုလ်ချုပ် “ဝင်းဂိတ်”က သူရဲ့ စစ်တပ်မဟာကြီးထဲက စစ်သားပေါင်း မြောက်မြားစွာနဲ့ ဆွေးနွေး တိုင်ပင်နေသလို၊ ဗိုလ်ချုပ် စတီးဝဲလ်ကလည်း သူ့ရဲ့ တရုတ်တပ်သားတွေရဲ့ လေ့ကျင့်ရေးကို အရှိန်မြှင့်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။
အမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့ အထူး ကွန်မန်ဒိုတွေကို ဗိုလ်မှူးကြီး “ဘီကော့ခရန်” ရဲ့ လက်အောက်မှာ ချထားပြီး၊ မာရေးမရူးဒါး လို့ ခေါ်တဲ့ရှေ့ပြေးတပ်ကလည်း ဗမာပြည်ရဲ့တောနက်ကြီးထဲကို ထွက်ခွာဖို့ အသင့်ဖြစ်နေပါတယ်။ ရှေ့ပြေးကင်းထောက် လေယာဉ်က ဗမာပြည်ရဲ့ တောနက်ကြီးတွေထဲမှာ ရေဒါစနစ်နဲ့ ဂျပန်တွေရဲ့ အခိုင်အမာ တပ်စွဲထားတဲ့ စခန်းတွေကို ကောင်းကင်ကနေ လျှို့ဝှက်ပျံသန်းပြီး ထောက်လှမ်းကာ ဓာတ်ပုံရိုက်လာနိုင်တဲ့ အချိန်ကို မျှော်နေကြရပါတယ်။
ရှေ့ပြေး ကင်းထောက် လေယာဉ်ဟာ အိန္ဒိယ နယ်စပ်တောထဲမှာ ဖက်ဆစ်ဂျပန်တွေ ခိုအောင်းရာကို ထောက်လှမ်းမိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ ဓာတ်ပုံ အညွှန်းတွေအရ တရုတ်နိုင်ငံထဲကို ပျံသန်းနေတဲ့ မဟာမိတ်တို့ရဲ့ လေယာဉ်တွေကို ရုပ်ဖျက်ပြီး စုံစမ်းထောက်လှမ်းနေတဲ့ ဖက်ဆစ်ဂျပန်တွေရဲ့ ရေဒါစနစ်ကို ရှာဖွေပြီး ဖျက်ဆီးပစ်ဖို့အတွက် လေကြောင်းကနေ လေထီးနဲ့ ဆင်းနေရမယ့် အခြေအနေ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ အခြေအနေကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် သုံးသပ် ညွှန်ကြားနိုင်မယ့်၊ မိမိတို့ရဲ့ စစ်ဆင်ရေးအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ရှင်းပြနိုင်ဖို့ ဝါရင့် စစ်သတင်းထောက်လည်း ဖြစ်တဲ့ တရုတ် ဗိုလ်ကြီး (သရုပ်ဆောင် ဟင်နရီ ဟောလ်) နဲ့ ဂေါ်ရခါးလမ်းပြတွေကို သီးသီးသန့်သန့် တာဝန်ခွဲဝေပြီး ဆွေးနွေးကြရပြန်ပါတယ်။
ဒီကိစ္စအတွက် ဗိုလ်ကြီး နယ်လ်ဆင်ကို တာဝန်ပေးပါတယ်။ လူ ၃၆ ယောက်ပါတဲ့ အဖွဲ့ကို ဦးစီးပြီး၊ ကောင်းကင်ကနေ ညအချိန်မှာ လေထီးနဲ့ ခုန်ချကြကာ ဖက်ဆစ်ဂျပန်တွေရဲ့ အရေးပါတဲ့ ရေဒါစခန်းကြီးကို ရှာဖွေတိုက်ခိုက်ပြီး ဖျက်ဆီးပစ် ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားရဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေဟာ တကယ့် အဖြစ်အပျက်တွေကို ပြန်လည်ရိုက်ကူး တင်ပြတာလည်းဖြစ်ပြီး ၁၉၄၅ ခုနှစ် အကယ်ဒမီ ဆု ၃ ခုအတွက် ဆန်ခါတင် ပါခဲ့ပါတယ်။ တည်းဖြတ်မှု၊ ဂီတနဲ့ ဇာတ်လမ်းဆိုတွေအတွက် ဆန်ခါတင် ပါတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လောက်ပဲ အတွေ့အကြုံ ရှိခဲ့ပါတယ်ပြောပြော မှောင်မည်းနေတဲ့ ညကြီးသန်းခေါင်မှာ ဟိုအာကာသ အမြင့်ကြီးကနေ ဆူးငြောင့်ခလုတ်တွေ ဘာတွေ ရှိမှန်းမသိတဲ့ တောထဲကို လေထီးနဲ့ ခုန်ချဖို့အတွက် လေထီးစစ်သား ၃၆ ယောက်လုံးဟာ ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေကြပါတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ မြေပြင်ကို ကံကောင်းထောက်မစွာ ၃၆ ယောက်လုံး အဆင်ပြေပြေ ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
အထက်က ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း အရေးကြီးတဲ့ ဖက်ဆစ်တို့ရဲ့ ရေဒါစခန်းကြီးကို ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အမိနိုင်ငံကို ပြန်ဖို့ အတွက် ဆုံမှတ်ကို သွားတဲ့အခါမှာတော့ သူတို့ကို ဖြတ်စောင့်နေတဲ့ ဂျပန်စစ်တပ်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံ တိုက်ပွဲ ဖြစ်ရပါတော့တယ်။
အထက်က ညွှန်ကြားတာကတော့ လေယာဉ် ဆင်းစရာနေရာ မရှိတဲ့အတွက် ရန်သူနဲ့ လွတ်ကင်းတဲ့ နေရာကို ရောက်အောင်သွားဖို့ ညွှန်ကြားလာတာကြောင့် ဗိုလ်ကြီး နယ်လ်ဆင်ဟာ တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူ မိုင် ၁၅၀ ခရီးကို ချင်းတွင်းမြစ်ကြောင်းနဲ့ အပြိုင် တောတွင်းမှာ လမ်းလျှောက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ရပါတယ်။
စုံစမ်းထောက်လှမ်းမှုတွေနဲ့ ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကို လျှော့ချပြီး လူသူမနေတဲ့ ဗမာရွာလေးတရွာမှာ ပြန်ဆုံဖို့ ၃၆ ယောက် အုပ်စုကို အဖွဲ့ခွဲလိုက်ရပါတယ်။ ကံဆိုးစွာပဲ တပ်ကြပ်ကြီး ဂျက်ကော့ဖ် ဦးဆောင်တဲ့ တပ်ဖွဲ့ဟာ ဖက်ဆစ်တွေရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ၂ ယောက်ပဲ အသက်ရှင်ကျန်ခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်ကြီး နယ်လ်ဆင်ဟာ ရိက္ခာပြတ်လပ်မှုကြားထဲက ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ရပ်တည်ရင်း အသက်ရှင်ကျန်နေတဲ့ စစ်သားတွေကို စုစည်းပြီး ရန်သူ ဖက်ဆစ်ဂျပန်တွေ နေရာကို ရောက်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြရပါတယ်။
သတ်မှတ် ကာလတွေထက် ရန်သူ့နယ်ပယ်ထဲမှာ စွန့်စားနေရပြီးမှ မဟာမိတ်တို့ရဲ့ ရဟတ်ယာဉ်က ပြန်လည် ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၄၄ မှာ ဗမာပြည်အတွင်း ကျူးကျော်ရက်စက်တဲ့ ဖက်ဆစ်ကို မောင်းထုတ် အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ တာဝန် အလဲအလှယ်လုပ်ပုံမျိုးနဲ့ ရုပ်ရှင်ကို အဆုံးသတ်ထားပါတယ်။
၁၉၄၅ ခုနှစ်မှာ Objective, Burma! ရုပ်ရှင်ဟာ ပြင်သစ်မှာလည်း နာမည်ကြီး လူကြိုက်များခဲ့ပါတယ်။